हँसिया हथौडामा भोट हाल्ने विषयमा गगन भन्छन्, कांग्रेसको निर्णय मान्न कांग्रेसी बाध्य छैनन् - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
हँसिया हथौडामा भोट हाल्ने विषयमा गगन भन्छन्, कांग्रेसको निर्णय मान्न कांग्रेसी बाध्य छैनन्
पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव आउन अव केही दिन मात्र बाँकी छ । दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ लाई तोकिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्नेछ । तर निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्था विपरित सरकारलाई जेठ ३१ अघि बजेट नल्याउन निर्देशन दिएको छ । पहिलो चुनाव लगत्तै प्रचरण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति छ । त्यसैले ३१ पछि थुप्रै अन्यौलता देखिएका छन् । ती अन्यौलता चिर्न सरकार कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ नेपाली हेडलाइन्सका लागि बोमलाल गिरी र प्रयास पराजुलीले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापासँग गगरेको कुराकानीः
पहिलो चरणको निर्वाचन हुने पक्का भो दोस्रो चरणको निर्वाचन के हुन्छ ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा अब कुनै शंका छैन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनको वातावरण बनाउन लाग्नु पर्छ । सरकारको ध्यान दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जानु पर्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको चिन्ता नगरौं ।
सुरक्षा र व्यवस्थापकीय काम बाहेक सबै निर्वाचन आयोगले जिम्मा लिइसक्यो । सरकारको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । चुनावपछि सरकार परितर्वनको एउटा सन्दर्भ आउँछ। पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै हामीले सहमतिको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यो नै बुद्धिमानी हुन्छ ।
अब सरकारको आयु कति हो ?
कांग्रेस र माओवादीको बीचमा भएको सहमति अनुसार निर्वाचन लगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा निश्चित छ । जेठ १ र २ गतेतिर होला । पहिलादेखि नै पार्टीको बैठकमा नेताहरुले जानकारी गराउनुभएको कुरा हो । पहिलो चरण सकिएपछि जेठ पहिलो साताको कुनै पनि दिन हुन सक्छ ।
प्रचण्ड सरकारले बजेट ल्याउछ कि ल्याउदैन ?
यो सरकारले बजेट ल्याउदैन । नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँछ । समझदारी पालना गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको दल प्रतिबद्ध देखिन्छ । सरकार फेर्ने दलहरुको बीचको समझदारी भयो । तर बजेट ल्याउने कुराले त धेरै कुरालाई प्रभावित पार्छ ।
जेठ १५ गते बजेट नल्याउने हो भने धेरै सुविधा छैन् । तर असार १५ गते बजेट ल्याउने हो भने हामीसँग केही समयको सुविधा रह्यो । बजेटको काम टुङग्याउने गरी तिब्र रुपमा गएको थियो । बजेट सर्छ भनेपछि तयारी केही रोकिएको छ । नेतृत्व फेरिएपछि बजेटेको प्राथमिकता फेरिन्छ भन्ने कुरा पनि रहे ।
संविधानमा उल्लेख भएकैजस्तो गरी जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने हो भने सरकारको नेतृत्व फेरिएला । दलहरुको बीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर राम्रोसँग छलफल भएको छैन् ।
अहिले अलमल छ । बीचको बजेट र नियमित कामहरु पनि यसको पेलाइमा पर्ने भयो । यस पटकको बजेट पहिलेको जस्तो सजिलो पनि छैन । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा बजेट पठाउनुपर्छ । के मा पठाउने ? केलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? धेरै गाह्रो छ ।
प्रधानमन्त्रीले पपुलिष्टभन्दा पनि सामान्य बजेट सहित जेठ १५ मै ल्याउने कुरा गनुभएको छ । त्यो कति सम्भव छ ?
जेठ १५ मा बजेट ल्याउन पाइदैन भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ । एमालेले दबाब दिएको छ । तर प्रश्न संविधानमा लेखिएको कुरा निर्वाचन आयोगको चाहना र पत्राचारले मात्र हट्छ त ? यसलाई पनि निर्क्यौल गर्नुपर्छ । ठूलो अलमलमा छ ।
निर्वाचनमा पार्टीको तयारी कस्तो छ ?
पार्टी ठूलो छ । धेरै बर्षपछि चुनाव हुन लागेको छ । मेयरको उम्मेदवारको लागि ६८ बर्षको प्रभावशाली नेतादेखि लिएर ३२ बर्षको साथी दावेदार देखिनुभयो । सबैको कुरा जाजय छ । उम्मेदवार छनोटमा असन्तुष्टि देखिएको छ । हठात रुपमा आएको तालमेलको कुराले अन्यौलता सृजना भएको छ ।
तालमेलेको कुराले कतिको प्रभाव पार्छ त ?
निर्वाचनको बेलामा धेरै कुरालाई सीमामा बाँधेर राख्नु पर्ने हुन्छ । कांग्रेसले निर्वाचनको तत्कालिन विजय वा पराजलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्दै आएको छैन् । निर्वाचनको अंकगण्तिा मात्र हेरेर निर्णय गरेको भए धेरै पहिला नै सकिसक्थ्यो ।
कांग्रेस भनेको त विचार हो । कांग्रेसको अस्तित्व र धारणा छ । यसले ठूलो स्खलन गराएको छ । यसले दुरगामी प्रभाव पार्छ । पार्टीले निकै ठूलो समिक्षा गर्नुपर्छ । सबै निर्वाचनमा छौं । नेतृत्वले सोच्यौ होला । तत्काल पार्टीलाई फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा सोच्यो होला । आजसम्म कांग्रेसका साथीहरुले कांग्रेस भन्दा अन्यत्र मत हाल्नु भएको छैन् ।
यस पटक त हँसिया हथौडामा भोट माग्नु पर्ने भो नि त ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीकबीच तालमेल भएको छ । गठबन्धन भएको छ । कांग्रेसले के विर्सनु हुँदैन भने कांग्रेस र कांग्रेसी भनेको फरक हुन् । हाम्रो पार्टीभित्र कुरा हुने गर्छ । पार्टी के हो ? संगठन पनि यस्तो छैन । तर पनि पार्टी चुनावमा जितेर आउछ ।
कारण के हो भने हामी कांग्रेसी संगठनमा छौं । पार्टीले निर्णय गर्यो मान्छौ । कांग्रेसले के विर्सियो भने वर्वाद हुन्छ भने कांग्रेसले गरेको निर्णय मान्न कांग्रेसी बाध्य छैनन् ।
व्यक्तिगत रुपमा कहिले पनि पार्टीको सदस्यता लिएको छैन् । मद्दत मागेको छैन् । तर मत हाल्ने बेलामा रुखमा हाल्छ । उसको एउटा विचार छ । खुल्ला समाज र राजनीतिको पक्षमा छ । त्यस्तैको भरमा पार्टीले जित्दै आएको छ । अब रुखमा मात्र होइन गाईमा हाल्ने भनेर भन्यो भनेपछि मनोविज्ञान विग्रिएको छ ।
तालमेल गरेपछि कांग्रेसलाई कार्यकर्ता सम्झाउन कठिन भएको हो ?
संगठनमा आबद्ध भएकाहरुलाई पार्टीको नीतिले बाध्छ । व्यक्तिगत असन्तुष्टि र फरक मत राख्छौं । तर अन्तिममा निर्णयले बाधिन्छौ । तय भएन भने अराजकता हुन्छ ।
मेरो पनि कति असहमति छ । कांग्रेसीको मत चाहिन्छ । हाम्रो संगठन त छ । सदस्यता सबै ठाउँमा बाडिएको छैन् । हामीले त सदस्य पनि चिन्दैनौ । विचारले बनेको पार्टी हो ।
कांग्रेसलाई भोट हाल्नु पर्ने कारण के हो ?
कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचमा मत माग्ने मात्र होइन । पुरस्कारको दावी गर्ने पनि होइन । पहिलो संविधान सभा असफल भयो दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान जारी गछौं भनेका थियौं । हामील गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्यो । जनताको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेको हुनाले जनताले पुरस्कृत पनि गर्ने हो ।
नेपाल, सबै अट्ने देश, सबै अट्ने कांग्रेस । मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई जोडन सक्ने पार्टी कांग्रेस मात्र हो । पार्टीले घोषणा पत्रमा अगाडि सारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिएको छ ।
पाँच बर्षको अवधिमा अहिलेको तुलनामा राम्रो बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तीन गुणा परिवर्तन गर्ने योजना सहित जान्छौं । स्थानीय सरकारले जे अधिकार पाएको छ । पाँच बर्षभित्र यहाँ पुर्याउँछौ भनेर स्पष्ट मत अघि सारेको छ ।
Previousनयाँ शक्तिका केन्द्रीय नेता माओवादी केन्द्रमा
Nextकस्तो छ उत्तर कोरियाको परमाणु संयन्त्र ?